APPLE "ROBIN QURXINTA": SHARAXAAD IYO SAWIR, DARYEEL IYO BEERITAANKA - BEERTA
Kala duwanaanta xilliga dayrta ee loo isticmaalo naqshada muuqaalka - tufaaxa Roobin
Abaabul Qurxoon - geed ayaa si ballaaran loo isticmaalaa qorshaynta muuqaalka iyo beerta qurxinta.
Geedku wuxuu u muuqdaa mid qurux badan inta lagu jiro Bisaylkiisa.
Apple Robin wuxuu loola jeedaa noocyada qurxinta ee geedaha. Dibedda oo la mid ah sakura. Waxaa loo arkaa noocyo kala duwan oo dayrta. Winter-adag ku filan. Miraha, inkastoo yar, laakiin la cuni karo (loo isticmaalo diyaargarawga waxqabadka), waxaa lagu gartaa nolosha shafka dheer.
Si aad u sii dheeraato waqtiga waa lagama maarmaan in la raaco xeerarka fudud:
ugu fiicnaanta - heerkulkulbaha;
kaydinta weelasha alwaax (roogagga, weelasha, sanduuqyada);
qol mugdi leh qoyaan yar;
Kalabixinta hordhaca ah ee cabbirka miraha;
Kala duwan kasta waxaa lagu kaydiyaa weel gaar ah.
Maaddaama ay tahay beerta is-gaarsiinta, is-galka ayaa dhacaya sababtoo ah manka oo ah ubaxyo tufaax ah oo kala duwan.
Kala duwanaantan ayaa si firfircoon uga qayb qaata geeddi-socodka iskutallaabta.
Fikrad ahaan, caleemaha dhirta laba nooc oo kala duwan fogaan ah shan mitir oo midba midka kale ah.
Sharaxaada kala duwan "Robin qurxinta"
Muuqaalka muuqaalka geedka tufaaxa waxaa lagu gartaa dherer celcelis ah, tufaax qafiif ah oo qafiif ah oo cagaaran iyo miraha casaanka ah ee casaanka leh.
Luxurious, size dhexdhexaad ah leh qurux, ubax casaan-cas cas. Crohn Cufnaanta, qaabka wareegsan leh mugdiga, laamiyada sarsare.
Geedka ayaa si fiican u dheelitiran leh caleemo cagaaran oo cagaaran leh miraha cows-cas. Geedka tufaaxa ee xagaaga ayaa isbeddelaya palette midabkiisa dhowr jeer.
Caleemaha brown-guduudan, waaweyn. Foosto badanaa waa la istirleeyaa.
Caleemaha waa ballaaran oo ballaaran oo ilaa 10 sentimitir dherer ah, oo ku dhawaad ​​wareegsan.
Inta lagu jiro ubaxyada casaan, iyo ka dib markii ay noqoto cagaar leh faro guduudan. Petioles waa gaaban, sababtoo ah caleemaha waxay ku dhow yihiin saldhigyada laamaha.
Celceliska dhererka geedku wuxuu ka jiraa afar ilaa lix mitir.
Yar yar (qiyaastii saddex cm dhexroor), geed waxay ku koraan tiro balaadhan, si aan caadi ahayn, qaabab kala duwan iyo koob aan lahayn.
Midabka - maroon dhalaalaya. Maqaarku wuu ku siman yahay ubaxyada. Jidhku waa caddaan iyo cufan ku filan.
In sawir waa dhir geed tufaax ah oo royal ah:
Geedka dhirta kala duwan ee kala duwan ee dhagaxa Robin waxaa lagu helaa adigoo ka gudbaya laba nooc: Nedzvetskogo iyo cawska sirdoonka ee Siberian.
Si kastaba ha ahaatee, suugaanta qoraalka ereyga "xulashada qaranka" ayaa loo isticmaalaa.
Tani waxay ka dhigan tahay in pollinadu ku dhacdey xaalado dabiici ah, iyo, ugu badnaan, noocyo badan oo kala duwan ayaa lagu qasi jiray.
Asal ahaan nooc ka mid ah tufaaxa Roobin quraaradaha ee wadamada Baltic. Waxa kale oo laga helaa bartamaha Russia. Waxay qaadataa xidid kasta oo carrada lagu buufiyo.
Geedka looma tixgeliyo inuu yahay mid madaxbannaan, laakiin xeerarka hoose ee daryeelka ma laga hortagi karo (hoos fiiri).
Dhirta Apple ayaa u bislaadaan bisha Sebtembar.
Tan iyo tan waa dal dalool ah, dhalidda waa daciif, miraha way yar yihiin dhinaca kale, u bislaadaan tiro badan.
Waa hagaag loo isticmaalo qaybinta.Waxay bixiyaan ari ah oo udgoon leh oo aysidhka fudud.
Geedka wuxuu bilaabmaa inuu midho dhasho sannadka afraad kaddib marka la beero.
Markaad beerto geed iyadoo la isticmaalayo bacriminta caadiga ah. In daryeelka ee geedka tufaax aan qabyo ahayn. Dhirta tufaaxa ee ornamental waxay ku fiican yihiin beerto kali ah.
Daryeel, beeritaanka iyo beerashada tufaaxa ornamental ma aha mid aad uga duwan daryeelka iyo beeritaanka dalagyada tufaaxa caadiga ah.
First of all, waxaad u baahan tahay inaad doorato meel loogu dego, waa inay ahaataa:
on a dhul qorrax leh;
meel ka fog dhulka;
oo leh ciid wanaagsan;
meelaha la miiray oo leh pH of 5.5-6.5.
Waa in la fuliyaa xilliga soo socda:
guga (dabayaaqadii Abriil);
dayrta (dhammaadka Sebtembar - horraanta Oktoobar).
TALO: Sida geedo kale oo tufaaxa kale ah, way ka fiican tahay in la beero xilliga dayrta.
Marka aad dooranaysid seedling, waa muhiim inaad tixgeliso soo socda:
waxaad u baahan tahay inaad doorato geedo leh nidaam xidid oo horumar leh oo aad ku iibsatid aag isla xaaladaha cimilada ah;
Waxaa fiican inaad doorto dhalinyaro dhoobo ah, ka dibna si dhakhso ah ayey ugu habboonaato carrada ku yaal goobtii uu ku koray.
MUHIIM: Geedaha leh xididdada la soo bandhigay waa in la dhigaa biyo ilaa saacad ka hor beerashada.
Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso godadka dhulka. Tani waxaa ugu fiican in la sameeyo bil ka hor beerashada. Xuduudaha ugu fiicnaanta ee ceelka loogu talagalay beeritaanka dhuudh oral ah: 1x1x0.7m.
18-20 kg oo ah digada;
WARBIXIN: Beerta American waxay kugula talinayaan in aan la gooyin godadka dhulalka horay, laakiin in ay qodaan maalinta maalinta beerto. Dabadeed maya isku darka iyo Bacriminta waa in la isticmaalaa. Waxaa lagama maarmaan ah in la dhigo lakabyo ciid ah oo bacrin ah oo lagu beddelo ciidda la kariyay ee lakabyada 15 sentimitir. Lakabka ugu sarreeya waa inuu ahaadaa mid bacrin ah.
Labadii sanno ee ugu horreysay waa muhiim in geedkii tufaaxu ku xidhnaa qoryaha alwaax (waxaa fiican in la isticmaalo geed ama lakab).
Daryeelka aasaasiga ah ee shanta sano ee ugu horreeya ka dib markii laga beerto:
dhulka hareeraha ilaa labaatan sintimitir.
Sannad labaad ka dib markii la beero, guga, waxay ka sameeyaan taajkii ba'an ee geedka tufaaxa. Apple noocyo kala duwan Robin qurxinta uma baahna manjooyin xoog leh. Waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo laamaha qalalan, jajaban, jaban oo gudaha ah.
Sidoo kale, labadii sanno ee ugu horeeyay waxaa lagu talinayaa in lagu dhajiyo dhammaan ubaxyada.
Geedka dhirta lagu qurxiyo, iyo sidoo kale geedo midho leh, waxay ku xiran yihiin cuduro kala duwan iyo cayayaanka.
Inta badan waa:
Gubo oo uu sababo bakteeriyada Erwinia amylovora. Noocyada cudurka qaba lama daaweyn karo, nasiib daro.
Waxay u baahan yihiin in la baabi'iyo sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si aysan u qaadsiin noocyada soo koraya ee ku dhow.
Wakiilka keena waa shey karantiil.
Macmacaanka macaanka - Tani waa cudur fungal ah. A calaamad muuqaal ah ee cudurka waa muuqaalka of fangaska mycelium ee foomka of ubaxyada caddaan on caleemaha geedaha.
Badanaa, cudurku wuxuu isu muujiyaa kadib roobab culus. Hurgunku wuxuu ka yimaadaa geedka hoostiisa, illaa uu gabi ahaanba weeraro geedka.
Sida ugu wanaagsan ee loola dagaalamo cudurkan waa in laga hortago, taas oo ka kooban:
burburinta walxaha ay saameeyeen (manjooyin);
pollination of sulfur colloidal iyo xeryahooda copper.
Muuqaalka qolofka waa in meesha ugu horeysa waxay ku dhuftey caleemaha geedka, ka dibna u guurto midhaha. Jirka ayaa weli ah mid caafimaad qaba.
Sababta fangaska noocan ahi waxay noqon kartaa hawada ku jirta gudaha taajka geed ama qoyaan badan.
Calaamadaha ugu horreeya ee qolofta waa muuqaalka kore ee dhibco cagaaran-brown on caleemaha, sidoo kale in tiro badan oo ah brown yar, sameysid qolof ah, dhibco on miro.
Si looga fogaado dhaawaca qolofka, waa muhiim Iska dhig geedka tufaaxa ah ee dalagyo kale beerta, si taxadar leh ula socoshada geedka iyo si joogto ah jeermiska u bacrin iyo bacrimiya ciidda.
Kahortaga ka hortagga:
gelinta dambaska ciidda;
quudinta leh compost.
Apple Robin qurxinta waxaa loo isticmaalaa kiisaska intooda badan sida dhaqanka qurxinta.
Miraha yar yar ayaa keena, laakiin leh dhedhuudh, dhadhan raspberry ah.
Dheer loo isticmaalo diyaargarawga.